Mitaky ny fialàn’ny praiminisitra Thailandey Gen Prayut ny mpanao fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Olona 42 no voasambotra, tsy ampy taona ny 19 amin'izy ireo
Voadika ny 13 Septambra 2021 7:33 GMT
Ireo mpanao fihetsiketsehana nampiseho fiarahabana amin'ny rantsana telo nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny 19 Aogositra. Nitana sora-baventy mivaky hoe “Raha tsy miandany amin'ny toe-javatra tsy ara-drariny ianao dia nifidy ny lafin'ny mpampahory” mihitsy ny iray. Saripikan'i Anna Lawattanatrakul / Prachatai
Navoakan'i Prachatai, tranokalam-baovao tsy miankina iray any Thailandy ny kinova voalohany amin'ity lahatsoratra ity , ary nasiam-panovana sy navoakan'ny Global Voices indray noho ny fifanarahana fizarana votoaty.
Nanao fihetsiketsehana isan'andro nanomboka 16 hatramin'ny 22 aogositra ny vondrona mpikatroka Thalufah ho fanoherana ny tsy fahaiza-mitantana ataon'ny governemanta Thailandey amin'ny areti-mifindra COVID-19, no sady mitaky ny fialàn'ny praiminisitra Gen Prayut Chan-o-cha ihany koa.
Nitohy nandritra ny herinandro ny fihetsiketsehana na dia naparitaky ny polisy misahana ny vahoaka aza ny diabe fihetsiketsehana 16 aogositra sy 17 aogositra. Tamin'ny 18 Aogositra, nanao fihetsiketsehana tao amin'ny Tsangambaton'ny Demaokrasia ao Bangkok ny vondrona – ny voalohany tamin'ny fihetsiketsehan'izy ireo nifarana tsy naparitaka an-keriny.
Niverina tao amin'ny Tsangambaton'ny Demaokrasia izy ireo tamin'ny 19 Aogositra, mba hanao fihetsiketsehana iray hafa, nomonosan-dry zareo tamin'ny lamba mainty ny soratra maodelin'ny lalampanorenana ho fampitana ny tsy fisian'ny fanantenana amin'ny toe-draharaha. Nodoran-dry zareo ihany koa ny sarin'ireo mpikambana ao amin'ny kabinetra, solombavambahoaka, ary loholona ho fanehoana fanoherana.
Tamin'ny 20 Aogositra, nikarakara valalamanjohim-panoherana ny Thalufah nitsidika masoivoho telo tao Bangkok hametraka fanangonan-tsonia mitsikera ny programa vaksinin'ny COVID-19 sy ny fampiasan'ny manampahefana Thai herisetra amin'ireo mpanao fihetsiketsehana mpanohana ny demaokrasia.
Nankany amin'ny Masoivohon'i Soisa aloha ny vondrona hametraka fanangonan-tsonia momba ny fampiasan-kery hanaparitahana ireo mpanohitra ny demaokrasia farany teo, izay mety ho fanitsakitsahana ny Fifanarahana Geneva sy ireo lalàna iraisampirenena hafa. Niantso an'i Soisa ny vondrona, amin'ny maha mpikambana ao amin'ny Komitin'ny Vokovoko Mena Iraisam-pirenena azy, hanadihady ny governemantan'i Gen Prayut amin'ny mety ho fanitsakitsahana ny Fifanarahana.
Avy eo dia nankany amin'ny Masoivoho amerikana izy ireo mba hametraka fanangonan-tsonia momba ny vaksinina Pfizer COVID-19 1,5 tapitrisa natolotry ny governemanta amerikana ho an'i Thailandy. Nisy ny tatitra fa nahazo io vaksiny io alohan'ny mpiasan'ny fitsaboana ny mpiasan'ny tafika, nefa tsy ampy ny vakisiny ho an'ireo mpiasan'ny fitsaboana eny amin'ny loha-laharana raha toa hita ao amin'ny lisitr'ireo nahazo vaksiny Pfizer kosa ireo tsy mpitsabo.
Nangataka tamin'ny governemantan'i Etazonia ny vondrona mba hanaraha-maso ny fizaran'ny governemanta ny vaksiny Pfizer mba hahazoana antoka fa nozaraina ara-drariny ireo vaksiny, ary koa hanamelohana ilay voalaza fa kolikolim-bakisiny.
Solontenan'ny vondrona mitana ny kopian'ny fanangona-tsonia teo anoloan'ny masiovohon'i Soisa. Saripikan'i Anna Lawattanatrakul / Prachatai
Tany amin'ny Ambasady Shinoa no nifaranan'ny valalamanjohy, izay nametrahan-dry zareo ny ango-tsonia mangataka amin'ny manampahefana shinoa hanadihady amin'ny fividianan'ny governemanta thailandey ny vakisiny COVID-19 Sinovac sy hampiatoana ny fividianana. Nambara tao amin'ny taratasy nanagona-tsonia ihany kosa fa tsy mangarahara ny governemanta thailandey amin'ny fividianana vakisiny avy any Shina.
Nandeha nankany amin'ny Tranoben'ny Firenena Mikambana ihany koa ny Thalufah tamin'ny sabotsy 21 aogositra, hametraka fanangona-tsonia tao amin'ny Mpandraikitra ambony ao amin'ny Firenena Mikambana misahana ny Zon'olombelona (OHCHR) mangataka amin'ny OHCHR hanadihady ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona tao Thailandy tamin'ny herintaona, indrindra fa tao amin'ny rafi-pitsarana. Nangatahan-dry zareo ihany koa ny Firenena Mikambana hamoaka taratasy ho an'ny governemanta thailandey momba ireny fanitsakitsahana ireny ary miantso azy ireo hanaraka ny fitsipika iraisampirenena. Antenain-dry zareo ny OHCHR fa hanampy ireo mpikatroka mpanohana ny demaokrasia izay hazonina eo am-piandrasana ny fitsarana azy ireo izay amin'ny vesatra nampiharan-dry zareo ny fahalalaham-pitenenana sy ny zony ho afa-mivory am-pilaminana.
Afisy ahitana ny tavan'ny Jeneraly Prayut nofetahana loko mena ary naparitaka nanodidina ny Tsangambaton'ny Fandresena nialoha ny diabem-panoherana 16 aogositra. Saripikan'i Anna Lawattanatrakul / Prachatai
Hetsi-panoherana amin'ny endrika fanatanjahantena
Niverina teo amin'ny Tsangambaton'ny demaokrasia tamin'ny alalan'ny endrika fanatanjahantena ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny alahady 22 aogositra. Nanomboka tamin'ny alalan'ny matso an-dihy notarihan'i Thanat Thanakitamnuay, mpitarika teo aloha tao amin'ny komitim-panavaozana demaokratikam-bahoaka (PDRC) izay vao nanatevin-daharana ny hetsika pro-demaokratika, ary mitazona sora-baventy milaza hoe “Ny firahalahiam-bahoaka” ny lanonana.
Tsy afa-nahita ny mason'i Thanat ankavanana raha naratra izy nandritra ny fifandonana nifanaovan'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny polisy misahana vahoaka teo amin'ny fihaonan-dalana Din Daeng tamin'ny 13 aogositra, raha nitifitra azy tamin'ny kapoaka baomba mandatsa-dranomaso teo amin'ny tavany polisy. Nivoady ny hitory ireo tompon'andraikitra tamin'ny nampaharatra azy ny fianakaviana.
Thanat Thanakitamnuay manatevin-daharana ny diabe. Saripikan'i Anna Lawattanatrakul / Prachatai Thanat Thanakitamnuay joining the parade. Photo by Anna Lawattanatrakul / Prachatai
Nifandimbiasana ny kabary nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ireo hetsika ara-panatanjahantena isan-karazany, anisan'izany ny tifitra filesy lava sy ny futsal (baolina an-trano). Nanao fampisehoana ihany koa ny vondrona skateboarder iray raha hosodoko amim-kitapo misy ny ssarin-tarehin'i Gen Prayut ireo mpanao fihetsiketsehana hafa.
Mpanao fihetsiketsehana iray mikorisa eo akaikin'ny Tsangambaton'ny Demokrasia nandritra ny fihetsiketsehana. Saripikan'i Anna Lawattanatrakul / Prachatai
29 no voasambotra nandritra ny fifandonana tao amin'ny fihaonan-dalana Din Daeng
Mandritra izany fotoana izany, nisy ny fihetsiketsehana iray hafa tao amin'ny fihaonan-dàlana Din Daeng tamin'ny alahady 22 aogositra. Nifandona tamin'ny polisy mifehy ny vahoaka nipetraka teo anoloan'ny foiben'ny Departemantan'ny Tafiky ny Mpanjaka Thailandey ny vondrona mpanao fihetsiketsehana fantatra ankehitriny amin'ny anarana hoe vondrona “Thalu Gaz” («Manindrona amin'ny alàlan'ny gazy»), nanipy baomba ping pong sy marbra teny amin'ny faritry ny polisy. Namaly tamin'ny bala fingotra, tafondron-drano, ary baomba mankarenin-tsofina mahataka-davitra “Long-Range Acoustic Device” (LRAD) ny polisy.
Niezaka nandalo ny sakana nataon'ny polisy hankany amin'ny foiben'ny Rezimanta miaramila mpandeha an-tongotra voalohany ireo mpanao fihetsiketsehana, izay nitaingina moto ny ankamaroany mba hitaky ny fialàn'i Gen Prayut.
Nijanona teo anoloan'ny Hopitaly Jeneraly Bekotromaroholatra ihany koa ny mpitandro ny filaminana mifehy ny vahoaka, niaraka tamin'ny kamiaoben-tafondron-drano roa. Tamin'ny 6:10 hariva, noteren'ny polisy hihemotra tamin'ny alàlan'ny fandefasana baomba mandatsa-dranomaso, bala fingotra sy fanapoahana tafondron-drano ireo mpanao fihetsiketsehana.
Toeram-pifandonana isan'andro teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny polisy mifehy ny vahoaka nandritra ny herinandro lasa teo ny fihaonan-dalana Din Daeng, satria niezaka namaky hatrany ny sakan-dalana napetraky ny polisy ireo mpanao fihetsiketsihana mba hiditra ao amin'ny foiben'ny rezimantan'ny miaramila mpandeha an-tongotra voalohany, izay onenan'i Gen Prayut.
Nitatitra ireo mpisolovava Thailandey mpiaro ny zon'olombelona (TLHR) fa farafahakeliny olona 42 no voasambotra taorian'ny fihetsiketsehana tamin'io alahady io.
Nilaza ny TLHR fa ankizy tsy ampy taona ny 19 tamin'ireo voasambotra, ary 11 farafahakeliny no naratra nandritra ny fisamborana azy ireo. Voampanga ho nandika ny Didim-panjakana Hamehana izy ireo, nanao fivoriana misy olona mihoatra ny 10, ary manakorontana ny filaminam-bahoaka. Olona iray no voarohirohy ho manana fitaovam-piadiana, ary ny iray kosa voarohirohy ho manana fitaovam-piadiana mahery vaika (baomba).